Isikhumulo sezindiza eyinhloko eDominican Republic. Kuyini lokhu?
Noma yimuphi omunye Dominican Republic kunzima ngempela ukuhlukanisa sezindiza namuhla. Kungani? Yebo, ngoba ku insimu yonke republic kuphela omunye zezindiza zamazwe eziyisithupha, futhi ngaphandle kwazo, namanje amasango ethandwa futhi emoyeni ebaluleke lesifunda.
Isigaba 1. Ukwaziswa Okumayelana
Isikhumulo sezindiza ethandwa kakhulu e Dominican Republic eduze edolobheni resort of Punta Cana, etholakala ogwini olusempumalanga yezwe. isakhiwo sayo ikhanga abantu bakwamanye amazwe, njengoba ebonakala ngu izici evelele Dominican isitayela - sezindiza lihlotshiswe amasundu uphahla zokuhlobisa. ukubukeka kwalo exotic esivula phambi kwamehlo izivakashi ngemuva kokushiya izindiza, njalo imizwelo eyakhayo elikhanyayo. Kufanele kuthiwe Dominican Republic Airport Punta Cana ukuba ngempela matasa futhi usebenzela nokwanda kwalo kanye nokuvuselelwa kwazo kusukela 2009.
El Catey Airport itholakala enyakatho yale nhlonhlo we Samaná. Lokhu esibulalayo ngokukhethekile bakhelwe izindiza onqamula. Uthatha izivakashi kusukela ngo-2006. Uma oda amathikithi bathuthela eDominican Republic kule nkampani "Delta" nge ukudluliselwa e-New York, le airliner lawela esikhumulweni sezindiza iSantiago, nayo itholakala enyakatho yezwe.
Kumephu yezwe, kunezinye ezikhumulweni zamazwe omhlaba: eduze sezindiza Santiago - Puerto Plata, eningizimu yalesi siqhingi - La Izabella, empumalanga - Sabana de maar. Bonke babe eziningi izici zayo, ukubukeka ezithakazelisayo futhi eyingqayizivele. Uma ubheka kubo, uzoqonda ukuthi kungani "I-Dominican Republic, esikhumulweni sezindiza" - isithombe, okuyinto etholakala ingobo yomlando umndeni cishe zonke isihambi. Akukona ukuthwebula leli isakhiwo akunakwenzeka.
Ngamunye iyunithi ezokuthutha kuyinto yesimanje ngokwanele, futhi inthanethi nezinsizakalo amawebhusayithi yazi ngokushesha ngokwabo ulwazi olunikezwa Uhobhane. Kumawebhusayithi zezindiza ongawabhuka amathikithi endiza, futhi ngaleyo ndlela ugcine isikhathi esiyigugu.
Isigaba 2. Punta Cana
I sezindiza the Dominican Republic uthola kokubili ezindizeni avamile futhi maphepha. Kuyinto enkulu yezokuthutha ihabhu yezwe.
Kuze kube manje, Punta Cana lingelesithathu ngobukhulu e-Caribbean ngokuya umgibeli traffic. Nge Russia manje kusekela uxhumano eqondile sezindiza Dominican. Kusuka eMoscow kuya Punta Cana kukhona izindiza ngqo. Izikhangibavakashi isikhathi amahora angaba ngu-12 (indiza thro). Ungase futhi ukuthenga amathikithi izindiza nge zezindiza eYurophu nase-United States.
Ngokuvamile intengo kuhlanganisa zokuthutha, okuvumela ukuya ehhotela, lapho ufuna ukuchitha iholide okuphumuzayo. Nokho, eziningi amahhotela yokuhamba khulula kusuka esikhumulweni sezindiza. Amabhasi bathambekele ugcwele. Ngu itekisi, ungathola endaweni ngokunethezeka.
Isikhumulo sezindiza e Punta Cana - kungcono futhi eziningi amagumbi omhlangano zokungena Inthanethi, zokudla, libhala nezindawo zokudlela ezinhle, umama Igumbi ingane, kanye shopping centre enkulu.
Isigaba 3. Airport El Catey
El Catey sezindiza lwenzelwe ukukhonza indiza ezisindayo-duty. Okwamanje, kungathatha cishe izikhathi eziphindwe kasithupha abagibeli ngehora. Phakathi 2011, ethekwini wathola abantu abangaphezu kuka-121 eziyinkulungwane.
I ukugcina abagibeli isakhiwo has sesibili. nendawo ethize 8000 square metres. M. Ngemoto kusukela El Catey Las Galleras engafinyelelwa ehoreni elingu-1 kuya Santa Barbara de Samaná - imizuzu 40 futhi Las Terrenas - 20 imizuzu.
indawo ngokusemthethweni sezindiza ikuvumela ukuthola indiza ngakwesokudla usuku ukuhamba kanye nenombolo.
Phakathi abagibeli El Catey has a idumela onokwethenjelwa kunayo yonke labo litholakale Dominican Republic. International Airport, kodwa lisebenzela kokubili izindiza yasekhaya, kokubili umgibeli nempahla.
Uhlelo lokuthembeka Transaero "Ilungelo" Lokukhuluma. Ikhomba "Transaero Ilungelo" Lokukhuluma: ithebula
Yini fighter engcono kunazo zonke emhlabeni? Fighter engcono phezulu emhlabeni 10
Pattaya ngo-August: kuzibuyekezo, izintengo, izici iholide